Meteo malagasy : hatsaraina ny fahazoan’ny rehetra ny vaovao | NewsMada
Meteo malagasy : hatsaraina ny fahazoan’ny rehetra ny vaovao
Nampahafantarina, omaly, tetsy Ampandrianomby ny ezaka hataon’ny Meteo malagasy amin’ny fanatsarana ny fanomezam-baovao ny isam-paritra mikasika ny fampahafantarana ny toetr’andro.
Voalohany amin’izany ny fanatsarana ny tolotra alefa amin’ny haino aman-jery. Misy ihany koa ny ezaka hanakaikezana ny isam-paritra momba ny mety ho toetry ny andro hahafahany miomana amin’ny lafiny rehetra indrindra ny fandrindrana ny fambolena.
Ahitana ny sampan-draharahan’ny Meteo malagasy ny faritra 7 manerana ny Nosy. Tanjona ny hanitatra izany amin’ny faritra rehetra saingy mbola olana ny hoenti-manana indrindra ny olona ampy traikefa sy ny fitaovana.
Eo amin’ny lafiny tekinika, miezaka manome vaovao mikasika ny mety ho firafitry ny toetr’andro ao anatin’ny iray volana ho avy ny mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby. Hanao ny tombana ny efa lasa ihany koa izy.
Raha ny filazan’ny tompon’andraikitra, marina 84% ny vinavinan’ny mety ho toetry ny andro avoakan’ny Meteo malagasy vokatry ny fikarohana sy ny fandalinana ary ny fampiasana ireo fitaovana eo am-pelatanana.
Nitondran’ny Meteo fanazavana ihany koa fa mbola mihatra eto amintsika ny vokatry ny fiakaran’ny mari-pana na ny El nino. Mafy ny fiatraikan’izany, eto Antananarivo vokatry ny hamaroan’ireo fotodrafitrasa mitazona hafanana toy ny tara sy ny trano vita amin’ny simenitra.
Miverina isaky ny fito taona eo ho eo io El nino io raha ny fanazavana ary toetr’andro efa mpiseho hatrany amin’ny taonjato ela be. Teto amintsika, niteraka rotsak’orana betsaka sy toe-tany mafana tany amin’ny tapany avaratra ny El nino. Tsy fahampian’ny orana kosa no naterak’izany tany amin’ny tapany atsimon’ny Nosy.
Mikasika ny vanim-potoanan’ny fahavaratra, mbola any amin’ny faran’ny volana avrily any vao ho tapitra tanteraka ny orana ary miditra amin’ny vanim-potoanan’ny ririnina ny eto Madagasikara.